यी बानीहरू, जसले हामीलाई प्रगति गर्नबाट रोक्छ, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
यी बानीहरू, जसले हामीलाई प्रगति गर्नबाट रोक्छ, जान्नुहाेस्
हामी जहिले पनि आफ्नो प्रगति चाहन्छौं, उन्नती चाहन्छौं, समृद्धि चाहन्छौं । तर, भनेजस्तै सबैकुरा ठीकठाक हुँदैन । आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई निकै गाह्रो हुन्छ । धेरै त लक्ष्यमा नपुगी विचलित हुन पुग्छन् ।
आखिर के कारणले हामी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ ? किन हामीले चाहे जस्तो उन्नती, प्रगति हुँदैन ? यसको जबाफ हामी आफैभित्र खोज्नुपर्छ । किनभने, हाम्रो आफ्नै यस्ता बानी हुन्छन् जसले हामीलाई प्रगति गर्नबाट रोक्छ ।
समयको ख्याल नगर्नु
समयप्रति खासै सचेत एवं सर्तक नहुने बानी हामीमध्ये धेरैमा हुन्छ । हामी धेरै फुर्सदमा विताउन चाहन्छौ वा हरेक क्षण समय कटाउने वाहाना खोजिरहेका हुन्छौं । समयको महत्वलाई नबुझेर पनि गैर जरुरी काममा हामी घण्टौ बिताइदिन्छौं । यसले हामीलाई सधै पछाडि धकेल्छ ।
स्वास्थ्यका लागि समय नदिने
हामी निरोगी हुन चाहन्छौं, लामो आयु बाँच्न चाहन्छौं । तर, स्वास्थ्यका लागि समय निकाल्न जाँगर चलाउँदैनौं । त्यही कारण हामीलाई अनेक रोगले आक्रमण गरिरहेको हुन्छ । त्यही रोगसँग जुध्दा जुध्दै हामीले धेरै उर्बर समय गुमाउँछौं ।
नयाँ कुरामा अपडेट हुन नचाहने
हामीले समयसँगै आफुलाई पनि बदल्नुपर्छ । चाहे त्यो प्रविधिको कुरा होस् वा शिक्षाको, चाहे त्यो आर्थको कुरा होस् वा राजनीतिको । हामी नयाँ कुराप्रति सधै जिज्ञासु हुनुपर्छ र त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अझ अहिलेको प्रविधिको जमानामा हरेक कुरामा अपडेट भइएन भने हामी पछाडि पर्छौं।
आफुलाई उत्कृष्ट बनाउने कोशिश नगर्नु
हामी आफुलाई उत्कृष्ट बनाउने कोशिश गर्दैनौं । जे छौ, जस्तो छौं त्यसैमा भुलिन्छौं । आफ्नो कमी कमजोरी कसरी सच्याएर अघि बढ्ने वा आफ्नो क्षमतालाई थप कसरी निखार्ने भन्ने कुरामा हामी त्यती गंभिर हुँदैनौं । यसले पनि हामीलाई अगाडि बढ्न दिदैन ।
धेरै सोच्ने, काम नगर्ने
हामी जिन्दगीका लागि धेरै योजना बनाउँछौं । त्यसमध्ये कति योजना उत्कृष्ट पनि हुन्छन् । हरेक दिन जसो हामी आफ्नो कामबारे सोच्ने गर्छौं । तर, त्यही अनुसार काममा लाग्दैनौ । हाम्रा योजनाहरु धेरै बन्छन्, त्यसै थन्किन्छन् । यस क्रममा पनि कति समय बर्बाद हुन्छ ।
आफ्नो कमजोरी महसुष नगर्नु
हामीमा केहि न केहि कमजोरी हुन्छ । कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । तर, हामी आफ्नो कमजोरी के छ भनेर खुट्याउन सकिरहेका हुँदैनौ । अरुले कमजोरी देखाए पनि त्यसलाई महसुष गर्दैनौ । यसरी कमजोरीलाई नबुझ्नु वा बुझेर पनि ढाकछोप गर्ने बानीले अन्ततः हामीलाई नै प्रगति गर्नबाट रोक्छ ।
मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ बन्ने ?
१. अनावश्यक कुरामा एकोहोरो गहिरो सोचाइमा नपर्नुहोस् ।
कहिलेकाहीँ कुनै घटना, परिस्थिति तथा बाध्यतापछि हाम्रो मन भौँतारिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मन एउटै कुरामा घुमाइरहनुहुँदैन, बरु मन परिवर्तन गर्नुपर्छ । कुनै नराम्रो अनुभव मनमा लिइरहँदा त्यसले हाम्रो मस्तिष्कमा समेत असर पुर्याउँछ, शरीर तात्छ, मुटुको धडकन बढ्छ र छटपटी हुन्छ । त्यसैले अनावश्यक कुरामा एकोहोरो गहिरो सोचाइ राख्नुहुँदैन ।
२. अर्काको उपलब्धिलाई सजिलै ग्रहण गर्नुहोस् र खुसी हुनुहोस् ।
हामी हाम्रो प्रगति चाहन्छौँ, यो राम्रो पक्ष हो । तर, हामीमा केही गलत धारणा पनि रहन सक्छ । अर्काले प्रगति गर्दा आफूलाई ‘नकारात्मक मूल्यांकन गर्ने’, यो असाध्यै नराम्रो बानी हो र संकीर्ण साचाइ हो । त्यसैले मनलाई ठूलो पार्नुपर्छ, संकीर्ण पार्नुहुँदैन ।
धेरै मानिस यस्ता समस्याबाट पिरोलिएका हन सक्छन्, जसले मनमा अशान्ति फैलन्छ र हामीलाई मनोरोग लाग्न सक्छ । प्रगतिशील सच्चा सोचाइ ‘बाँचौँ र बचाऔँको भावना मनमा जागेको हुनुपर्छ । आफूभन्दा सानालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सोच हामीमा हुनुपर्छ र आफूसरहका मानिसको प्रगतिमा साथ दिनुपर्छ, आफूलाई अवमूल्यन गर्ने होइन ।
३. पुराना रुढिवादी कुरामा विश्वास नगर्नुहोस् ।
हाम्रो समाजमा बाटो हिँड्दा बिरालोले बाटो काट्यो वा रित्तो गाग्री देखियो भने अशुभ हुन्छ भन्नेजस्ता पूर्णतः अवैज्ञानिक गलत विश्वास छ। यस्ता वस्तु वा घटनामा मन बेचैन बनाउनुहँुदैन ।
यी रुढिवादी कुरामा कत्ति पनि सत्यता छैन भन्ने सोचेर मन ढुक्क बनानुपर्छ । राशिफल हेराउने, भूत, प्रेत बोक्सीको युगको अन्त्य भइसक्यो, त्यसैले यस्ता कुरामा चिन्ता लिएर समय बर्बाद गर्नुहुँदैन । बरु सफा पानी पिउने, ताजा खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ ।
राति बाटोमा हिँड्दा भूत लाग्छ भन्दै मन डराएर ढुंगोदेखि तर्सेर पनि मानिस बिरामी हुन्छ, मनोरोग लाग्न पुग्छ । त्यसैले पुराना गलत चलनचल्ती र मान्यतालाई हटाउनुपर्छ । कसैलाई बोक्सी भनेर कुट्ने गरिन्छ, जुन शतप्रतिशत झुटो कुरा हो ।
त्यसैले हाम्रो गाउँघरमा पनि आधुनिक चेतना जगाउनु आवश्यक छ । मरेको मानिसको आत्मा मनमा आउँछ भन्ने वा मरेको मनिसले दुःख दिएको भन्नेजस्ता गलत विश्वास छ, जुन सरासर झुटो साबित भएका छन् । यसमा विश्वास गर्नुहुँदैन । यस्ता कुरामा मन लगाउँदा अशान्ति हुन्छ र मनोरोग लाग्छ ।
४. हरेक काममा खुसी, सुखी तथा सन्टुष्ट बन्नुहोस् ।
दैनिक जीवनमा काम गर्दै जाँदा कहिले सफल भइन्छ त कहिले असफल । असफल भएका कारण हतास हुनुहुँदैन, बरु असफलताका कारण पत्ता लगाएर फेरि सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ । कदापि निराश हुनुहुँदैन । अरूसँग पनि सरसल्लाह लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ हाम्रा अगाडि समस्या नै समस्या तेर्सिएर बसेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आत्तिनु हुँदैन ।
कतिपय समस्या आफैँ पनि समाधान भएर जान्छन् । ३, ४ महिनापछि आउने समास्यालाई लिएर अहिलेदेखि नै चिन्तित हुनुहुँदैन । बरु आइपरेका वा सम्भावित समस्या समाधानको योजना बनाएर योपछि यो गर्छु भनी अघि बढ्नुपर्छ ।
कतिपय मिडियाले राम्रा कुरालाई पर्दापछाडि राखेर नराम्रा कुरालाई प्रचार गर्छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणमा बिग्रियो, भत्कियो, बेकार छ जस्ता भावना आउन सक्छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले धेरै रेडियो, टिभी, समाचार तथा डरलाग्दा दृश्य हेर्नुहुँदैन ।
५. जे छ त्यसमा सन्तुष्ट बन्नुहोस्, तर मिहिनेत गर्न नछोड्नुहोस् ।
धेरै मानिस आफू कहाँबाट आएको हुँ भन्ने पनि बिर्सन्छन् । विगतलाई बिर्सन्छन्, वर्तमानमा सन्तोष लिन चाहँदैनन् । उनीहरू समय पार गर्दै जाँदा ठूलो उन्नति भएको पनि बिर्सन्छन् र सधैँ असन्तोष राख्छन्, परिणामस्वरूप सधैँ दुःखी भइरहन्छन् ।
विगतमा आफू कुन अवस्थामा थिएँ, अहिले कुन अवस्थामा आइपुगेँ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मानिस ठूलो प्रगति गर्दा पनि क्षणिक आनन्द लिन्छन्, त्यसैले मनमा सन्तोष भएको हुँदैन । त्यसैले हामीले सन्तोष लिन सिक्नुपर्छ ।
मैले यो अवधिमा यति गरेँ, भगवान्ले मलाई यसरी पुर्याएका छन् भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्छ, तर मिहिनेत गर्न भने छाड्नुहुँदैन । पुराना असफलतालाई केलाउँदै लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ ।
६. लागुपदार्थ तथा दुव्र्यसनबाट टाढा रहनुहोस् ।
कतिपय मानिसको रक्सी पिउने बानी हुन्छ । बिस्तारै यी मानिस बिहानैदेखि रक्सी लिने र दिनदिनै मात्रा बढाउँदै जान थाल्छन् । अनि, रक्सीको मातमा झगडा गर्ने, श्रीमतीमाथि शंका गर्ने, कहिलेकाहीँ डराउने, घरबाट भाग्ने, छारेरोगजस्तै गरी ढल्ने गर्छन् ।
त्यस्तै, कतिपय मानिस लागुऔषध दुव्र्यसनीमा फस्छन्, जसले गर्दा दैनिक २–४ हजार रकम यसमा खर्च गर्न पुग्छन्, साथै अनैतिक काम गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्ता मानिस एड्स तथा हेपाटाइटिस बीजस्ता रोगबाट पनि ग्रस्त हुन पुग्छन् ।
सुई साटासाट गर्ने, छाडा यौनसम्पर्क गर्ने ड्रग्सका लागि रकम जुटाउन चोरी गर्ने पनि गर्छन् । त्यसैले यस्ता वस्तुबाट सधैँ टाढा रहनुपर्छ। लागुपदार्थको सेवन तथा दुव्र्यसनीका कारण अन्य मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना भएकाले यी वस्तुबाट सधैँ टाढै रहनुहोस् ।
७. दैनिक जीवनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् ।
समाजमा ठूलाले सानालाई हेप्ने आफू मात्र समाजमा प्रतिष्ठित बन्न खोज्ने, अर्कालाई हेप्ने र अर्कालाई उचित व्यवस्था मिल्नबाट अवरोध गर्ने पनि पाइन्छ, जुन आपराधिक मानिन्छ । यस्तो वातावरणको सधैँ अन्त्य गर्नुपर्छ ।
समाजमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएमा सबै मानिसलाई उत्तिकै क्षमता विकास गर्न सहयोग मिल्छ, कसैलाई डर हुँदैन, सबैको कल्याण हुन्छ । यस्तो वातावरण बनाउनु समाज तथा राष्ट्रको कर्तव्य हो ।
८. अति नैतिकवान् नबन्नुहोस् र अरूबाट पनि त्यस्तो आशा नगर्नुहोस् ।
नैतिकवान् बन्नु राम्रो कुरा हो र बन्नु पनि पर्छ । तर, राम्रै कुरामा पनि जब अति गरिन्छ, त्यो प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ । समाजमा कोही मानिस अति नै नैतिकवान् हुन्छन् । यस्ता मानिस हरेक काममा अति नै सचेत हुन्छन्, अरूलाई कुनै प्रकारको मर्का नपरोस् भनी हरेक क्षण ध्यान पुर्याउँछन् ।
तर, समाज त्यस्तो छैन, जसका कारण यस्ता मानिसले समाजबाट धोका पाउँछन् र मन दुखाउन पुग्छन् । उनीहरूलाई मनोरोग लाग्न पुग्छ । त्यसैले हामी केही हदसम्म तलमाथि हुनुपर्ने हुन्छ, न कि हरेक कुरामा अत्यन्तै ठिकसँग चल्नुपर्छ, अर्थात्, मानिस र परिवेशअनुसार नै आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ ।
केही मानिसलाई आफूले गरेकोबाहेक अरूले गरेको काममा चित्त बुझ्दैन । त्यसैले यस्ता मानिस आरुले गरेको काम सच्याउने गर्छन्, जस्तै, कोठा सफा गरेको मन नपर्ने, आफैँले सफा गर्नुपर्ने । यस्तो हुँदा दैनिक जीवनमा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ ।
त्यसैले केही हदसम्म अर्काले गरेको कामलाई पनि उचित स्थान दिनुपर्ने हुन्छ । समाजमा अति नैतिकवान् भई बाँच्न गाह्रो छ । त्यसैले आफू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र समाजअनुसार चल्नुपर्छ ।
९. मनका कुरा अरूलाई भन्ने बानी गर्नुहोस् ।
हामीमा ठूलो समस्या आउँदा पनि अरूलाई नभन्ने बानी हुन्छ, जसले मनमा अशान्ति फैलिन्छ । हावा भरिएको प्रेसरकुकरझैँ विस्फोट हुने वा अचानक सिठ्ठी लागेर ठूलो हलचल भएजस्तै हामीमा पनि हलचल हुन सक्छ । काम नबन्दा हातखुट्टा नचल्ने भई हामी बिरामी पर्छौं ।
त्यसैले मन गुम्सिएर रहेको कुराले पनि आफूलाई तनाव बढाउँछ । त्यस्ता कुरा आफ्नो मनखाने मानिससित भन्नुपर्छ, आफ्नो मनको वेदना अरूलाई व्यक्त गर्दा मन शान्त हुन जान्छ ।
१०. रोगसित आत्तिने र अनावश्यक चिन्ता लिने नगर्नुहोस् ।
पहिले–पहिले मानसिकरोग भनिन्थ्यो, तर अहिले मनोरोग भन्ने गरिन्छ । मनोरोग भनेको अति सामान्य टेन्सन हुनेदेखि कडा रोग सिर्जोफोनियासम्म पर्छ । त्यसैले अति सामान्य रोगदेखि कडा रोगसम्मका बिरामी यसमा पर्छन् ।
डिप्रेसन रोग लागेका बिरामीमा यस्तै चिन्ता हुन्छ कि, मेरो दिमाग नै आउट हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले आत्तिनुहुँदैन । सामान्य मनोरोग लोगेका बिरामीले अनावश्यक चिन्ता लिनुहुँदैन ।
Don't Miss it छाती तथा घाँटी पोल्ने, मुखमा अमिलो पानी आउने जस्ता समस्या हुनेहरुले एकचोटी पढ्नुहोला !
Up Next अत्यन्तै लाभदायक र औषधीय गुडले युक्त फल, टिमुरका फाइदा
मानिसलाई स्वस्थ राख्न नुनको ठूलो भूमिका हुन्छ । यसबाट शरीरलाई सोडियम र क्लोराइड तत्व प्राप्त हुन्छ । सोडियम नसा र…
यस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ अल्सर, कसरी जोगिने ?
पाचन प्रणालीसँग जाेडिएकाे याे एउटा खास राेग हाे । यसमा अामाशय, खाने नली या सानाे अान्द्राकाे सुरूकाे भागमा घाउ या…
श्रीमतीहरु श्रीमानको कस्ता कुरामा रिसाउने गर्दछन् ? यस्ता छन् दाम्पत्य सुखका कडी
जुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्ता कुराहरुलाई मतलब नै नगर्ने बानी सम्भवतः श्रीमतीहरुलाई आफ्नो श्रीमानको सबैभन्दा नराम्रो बानी लाग्नसक्छ ।…
कतै तापईको नियमित चाउचाउ खाने बानी त छैन ? सावधान ! यस्तो समस्या झेल्नु पर्ला !!
सस्तो अनि सजिलै भोक मार्न चाउचाउ सबैभन्दा चर्चित खानेकुरा हो। काँचै वा सुप बनाएर खान सकिने चाउचाउ स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक…